Falanqaynta IPhone 11 Pro Max: Apple wuxuu na siinayaa wixii aan weydiisanay | Wararka IPhone
IPhone 11 Pro Max dib u eegis: Apple waxay na siisaa wixii aan weydiisanay
Luis Padilla | | iPhone 11, dhowr
Waxaa jiray dareen ah in muddooyinkii dambe iPhone-ka uu ka dambeyay dhinacyo aasaasi ah. In badan waxay ahayd taleefanka leh natiijada ugu fiican, laakiin kuma dhammeyn heer sare qodobbada muhiimka ah sida sawir qaadista ama ismaamulka, oo ay xafiiltamaan calaamadeynta kala duwanaanta halka ka hor iPhone ay xukumaan dhibaato la'aan.
Awoodda processor-kiisa, softiweerka loo sameeyay iyo shaashaddiisa aadka u wanaagsan, waxyaabaha aan Apple waligiis ku fashilmin, isticmaaleyaashu waxay rabeen inay ku daraan kamarad la tartami kara tan ugu fiican suuqa, iyo ismaamul kama dambeys ah oo noo oggolaaday inaan ka tagno xeedhoyaasha guriga. walaac la’aan. Sannadkan Apple way na dhageysatay, natiijaduna waa iPhone 11 Pro Max.
1 Muujinaya kamarad
2 Ka culus, dhumuc weyn, batteri badan, ka awood badan
3 XDR bandhigay: hal liin, hal ciid
4 Kaamirada ayaa sameysa farqiga
5 Musharaxa lambarka 1
Apple waxay dooratay sanadkan inay na siiso naqshad joogto ah. Sannadkan waxay ahayd markiisii ​​moodooyinka aan lahayn "S" oo badanaa macnaheedu yahay isbeddel naqshad, waana sidaas ... ugu yaraan kalabar. Haddii aad eegto dhinaca hore, waxay la mid tahay XS Max, tii ka horreysay, laakiin gadaalku wuu ka duwan yahay. Midkoodna moodooyinka aan aragnay toddobaadyadan oo dhan kahor soo bandhigidda iPhone-ka ma guuleysan. Waxay u muuqatay inay adag tahay in la helo cutubkan oo leh saddex ujeedo si ay ugu muuqdaan kuwo ku wanaagsan taleefannada casriga ah ee had iyo jeer ku faana naqshaddiisa, laakiin way ku guuleysteen.
Muraayadda dambe waxay leedahay dhammaystir cusub oo matte ah, sida haddii ay tahay muraayad tarjumaysa, oo midabkeedu ka sii cawsan yahay midabka madow, isla markaana leh calaamadda Apple midig dhexda dhexdeeda. Apple waxay ka saartay silkscreens-yadaas xun hoosta, dhabarkaasna waxaan ku aragnaa kaliya tufaaxa qaniinsan, maxaa yeelay waxay tagaysaa iyada oo aan la odhan waa iPhone, kaas ayaa lagu arkaa isha qaawan. Dhamaadka Matte sidoo kale wuxuu leeyahay muuqaal gaar ah oo sida ay qabaan qaar siinaya xajin fiican, laakiin aanan si cad u cadeyn. Waxa aad u sheegi karto ayaa ah in dusha sare ee dusha sare uusan u nuglayn faraha. Apple waxay leedahay daaqadaha hore iyo gadaalba waa kuwa ugu adag suuqa, waa war aad u wanaagsan.
Sidii aan horeyba u sheegnay, moodellada noo yimid ka hor soo bandhigida iPhone-ka cusub ma aysan garaacin calaamadda, waana wax iska fudud sababtoo ah waxay ka soo bilaabeen aragti khaldan: in la qariyo moduleka kamaradda. Apple kaliya iskuma dayin inay qariso, waxay ku sii kordhisaa qaabkeeda. Muraayadda gadaal waxay ka joogsataa inay ahaato mid dhalaalaya si dhalaalaya, waxayna sidoo kale leedahay qallooc jilicsan oo gaara natiijada indhaha oo shaki gelisa haddii ay runti taagan tahay ama dhinaca kale ay noqon karto. Saddexda muraayadood ayaa sidoo kale taagan, oo ay ku wareegsan yihiin saddex siddo bir ah oo isku midab ah iPhone-ka.
Ka culus, dhumuc weyn, batteri badan, ka awood badan
IPhone 11 Pro Max cusub ayaa ka sii dhumuc weyn oo ka culus. Isbedelka dhumucda ayaa ah mid la iska indhatiri karo, kaliya 0,4mm ayaa ka badan tii ka horeysay, laakiin culeyska waa la ogaan karaa markaad haysato iPhone XS Max oo hal gacan ah iyo kan kale ee iPhone 11 Pro Max (18 garaam oo farqi ah). Sannad ka dib aniga oo leh XS Max, dareenka ku qaadista 11 Pro Max cusub ee jeebkaaga ayaa si isku mid ah u eg, laakiin haddii aad ka timid qalab yar, sida XS, X, ama xitaa ka sii badan haddii aad ka timid moodallo kale, waad ogaan doontaa. Waa qiimaha ay tahay inaan bixino si aan ugu raaxeysan karno mid ka mid ah horumarada weyn ee moodelkan 2019: batari weyn.
Awoodda batteriga ee IPhone-kan cusub ayaa la kordhiyay 25%, waxayna gaareen 3.969mAh. Haddii aan ku darno tan shaashad wax ku ool ah oo wax ku ool ah iyo processor-ka inkasta oo hagaajinta la helay, guud ahaan Apple waxay hubineysaa in iPhone 11 Pro Max uu leeyahay 5 saacadood oo ka isticmaalka badan kii ka horreeyay. Markii ugu horeysay ee 24 saacadood ee tijaabinta, iyo tixgalinta in isticmaalka uu ka sareeyay sidii caadiga ahayd, gaaritaanka 20% dhamaadka maalin aad uxun waa guul. Waan arki doonnaa haddii qaabkan aan ku dhammaado inaan u baahanahay Kiis Battery Smart ah, hadda uma maleynayo. By habka, waxaa hore u ka mid ah 18W xeedho oo degdeg ah iyo USB-C si ay u hillaac cable.
XDR bandhigay: hal liin, hal ciid
Shaashadda iPhone-kan cusub ayaa ka wanaagsan, shaki la’aanna wuu ka fiican yahay, tanina waxay xaqiiq ahaan u caddeyn doontaa warbixinta DisplayMate ee aan dhawaan soo daabici doonno. Bandhiggan cusub ee "Super Retina XDR" (oo aan loo baahnayn taageero) wuxuu hayaa cabirkiisa (6,5 "), xallinta iyo cufnaanta pixel (458ppp). Laakiin waxay kordhineysaa kala duwanaanta laba jeer (2.000.000: 1) waxayna leedahay dhalaalkeeda ugu badnaan 1200 nits, in kastoo loogu isticmaalo kaliya ugu badnaan marka aan ku raaxeysanno waxyaabaha HDR.
Si kastaba ha noqotee, Apple waxay doorteen inay baabi'iyaan qayb ka mid ah shaashadda oo in badan oo naga mid ah ay caado ka dhigteen, taasina waxay ku siinaysaa dareen qadhaadh markii aad bilowdo adeegsiga iPhone-kaaga cusub. Ka saarida 3D Touch waxay ka dhigan tahay yareynta dhumucda shaashadda sidaasna ku heleysa batteriga meel aad u badan (lacagtii labaad ee ay ahayd inaan sameyno), Apple-na waxay u bedeshay Haptic Touch, oo aan u baahnayn qalab dheeri ah, waxay shaqaysaa oo keliya loogu talagalay software. Wixii hore "cadaadis adag" hadda waa "saxaafad dheere", taasina waxay u baahan tahay waqti la qabsi. Adeegsiga macruufka 'iOS 13' tan iyo bishii Juun waxay iga caawisay la qabsiga isbeddelka, laakiin dareenka ayaa ka duwan kan XS Maxkeyga, waana wax aniga imika i dhibaya, in kasta oo aan hubo in toddobaadyo yar ka dib aan illoobi doono.
Aniga oo ka faa'iideysaneyna xaqiiqda ah in aan ka hadlayno shaashadda waxaan dhihi doonaa xoogaa ereyo ah oo ku saabsan FaceID, oo mas'uul ka ah "caan" caan ku ah sida loo naqdiyay sida loogu daydo. Nidaamka aqoonsiga wajiga Apple xoogaa wuu ka dhakhso badan yahay, laakiin wuu ka dheereeyaa wax horeyba u dheereeyay, sidaa darteed ma ogaan doontid mooyee inaad isbarbardhigto moodeel kale. Waxa aanan ogaan waa ficil ficil weyn, welina si toos ah ugama shaqeynayo. In kasta oo dib-u-dhacyadan yaryar ay jiraan, haddana waxaan ka sii jeclahay Taabashada Aqoonsiga, aniga oo aan shaki yar ka jirin.
Kaamirada ayaa sameysa farqiga
Cunsurka sameeya farqiga ugu weyn marka loo eego qaababkii hore waa shaki la’aan kamaradda. Muraayadaha saddex-geesoodka ah waxaa ku jira xagal ballaadhan iyo muraayadaha taleefanka, sida sanadihii hore, sidoo kale waxay ku dareysaa xagal ballaadhan:
Xaglo Ballaaran - ƒ / 1,8 - 100% Pixels Focus - 12Mpx
Telephoto - ƒ / 2 - 100% Pixels Focus - 12Mpx
Xagasha Wide Ultra - ƒ / 2,4 - 120º - 12Mpx
Marka lagu daro hagaajinta qalabka, Apple waxay hagaajisay nidaamkeeda Smart HDR, isla kii sanadkii hore ahaa xarunta muranka ee "saamaynta quruxda" sababtoo ah u janjeerida jilitaanka sawirada. Sannadkan sheekadu way is beddeshay, faahfaahinta lagu arki karo sawirrada, xitaa iyadoo la adeegsanayo qaabka Smart HDR, ayaa aad uga weyn. Qaabka sawirku wuxuu u socdaa hal talaabo oo dheeraad ah, in kasta oo cilladaha cillad la'aanta asalka ah wali la ogaan karo marka hore iyo sooyaalka aan si fiican loo kala soocin, hagaajinta taleefanka iyo awoodda hadda loo qaado sawirro leh xagal ballaaran (muraayadaha ugu fiican saddexda) ayaa ka dhigaya tayada sawirada mid sareeya.
Habayn Habeenkii 1aad
Xagal ballaadhan Smart HDR
Xagal ballaadhan HDR
Habayn Habeenkii 2aad
Laakiin xiddiga kamarada cusub ayaa ah Habeenkii Habeenimo ee cusub. Apple waxay ku dartay shaqadan, horeyba ugu jirtay taleefannada casriga ah ee ugu waaweyn tartanka, laakiin waxay ku sameysay inay run ka tahay qaabkeeda. Sawiradu ma ahan kuwo dhalaalaya sida kuwa aad ku heli karto Pixel ama Samsung, si fudud maxaa yeelay waa run. Apple ma rabto inay na siiso sawir midab leh, waxay rabtaa inay si dhab ah noo tusto sida ugu macquulsan, iyadoo la tixgelinayo in Habeenkii Habeenkii laftiisu durba khiyaaneeyo xaqiiqda, ugu yaraan waxay ku sameysaa sida ugu xushmadda badan ee suurtogalka ah. Heerka faahfaahinta ee sawirada aad kuheli karto shaqadan waa mid lala yaabo.
Iyo waxa ugu fiican oo dhan waa inaadan ahayn inaad noqoto sawirqaade xirfad leh si aad u isticmaasho, maaddaama ay si toos ah u shaqeyneyso markaad ogaato in xaaladaha iftiinka aysan fiicnayn, iyo haddii aad rabto, waxaad wax ka beddeli kartaa waqtiga soo-gaadhista (illaa 3 ilbidhiqsi) ama uga tag si otomaatig ah si ay iPhone u go'aansato ikhtiyaarka ugu fiican. Haddii ay ogaato inaad ku jirto safar, mahadnaqa xawaaraha, wuxuu kuu oggolaanayaa inaad kordhiso waqtiga soo-gaadhista illaa 30 ilbidhiqsi!. Xitaa waad u adeegsan kartaa si aad uhesho saameynta dhaqdhaqaaqa ee sawiradaada, sida faa iidooyinka.
Isku-darka xagasha ballaadhan, marka lagu daro inaad ku siiso suurtogalnimada inaad si fiican u sawirto muuqaallada iyo meelaha furan, ama aad ku qabato muuqaallo aragtiyo aan macquul ahayn, waxay awood u siineysaa hawl aad u xiiso badan kuwa leh caado ay ku jaraan dadka sawirrada. Markii aad sawir qaadaneysid waxaad ikhtiyaar u leedahay inaad xagal ballaadhan oo ballaadhan toos u qabato mid kale, oo leh aragti weyn oo aragti ah, oo markaa waad awoodi kartaa mar dambe sawirka haddii wax laga tagay. Doorashadan waa la joojiyay Laakiin xaaladaha nalalka xun, si fiican u illoobi maxaa yeelay waxay muujineysaa inay tahay bartilmaameedka ugu xun ee saddexda ah.
Xitaa isbarbardhiga sawirada iPohne XS Max, oo leh kamarad aad u fiican iyo qaabka Smart HDR, kala duwanaanshuhu waa ka sii muuqdaan. Aniguna kaliya kama hadlayo laydhka, laakiin sidoo kale faahfaahinta qabashada. Qaababka ayaa la ilaaliyaa, caleemaha geedaha waa la arki karaa, iyo sidoo kale baloogyada derbiyada cathedral, waa wax aan ku dhicin sawirada XS Max. Dhammaan sawirradan waxaa la qaadaa iyada oo aan saddex-geesood la gelin, aniga oo iPhone-keyga ku haysta laba gacmood, iyo dabcan iyada oo aan waxba dib loo taabanayn. Oo wali waa inaan ogaano waxa dhici doona markii muuqaalka 'Deep Fusion feature' yimaado, taas oo loo maleynayo inay sameyso sawirro aad uga wanaagsan, laakiin aan arki doonin illaa iyo inta laga gaarayo dayrta iPhones-ka cusub.
Sida fiidiyowga, iPhone-kan cusubi wuxuu kordhiyaa farqiga u dhexeeya tartanka, kaasoo markii horaba ahaa mid aad u wanaagsan. Waxay hagaajinaysaa xasilloonida, oo dhammaan muraayadaha indhaha ayaa awood u leh inay duubaan fiidiyowga 4K 60fps. Xitaa waad beddeli kartaa muraayada, adoo kordhinaya ama yareynaya dhaweyd, haa, had iyo jeer tayo leh 4K 30fps iyo ka hooseeya. IPhone-ku wuxuu si otomaatig ah u dooran doonaa muraayadaha ugu haboon ee dhaweyd aad doorato, iyo inkasta oo qaar "boodboodayaal" yaryar ah la dareemo markii la beddelayo muraayadaha indhaha, natiijadu runtii way fiicantahay.
Ma hilmaami karno kamaradda hore, oo kor ugu kacaysa 12Mpx (ƒ / 2,2) oo awood u leh inay duubto fiidiyoow qaab 4K ah 24/30/60 fps, oo leh Smart HDR iyo cusub ee "Slofies", oo ah sawirro muuqaal gaabis ah oo fiidiyoow ah oo dhowaan daadin doona sheekooyinka Instagram iyo wixii lamid ah. Xusuus gaar ah waa in lagu sameeyaa arjiga cusub ee Kaamirada saddexda nooc ee iPhone 11, oo wata aalado badan iyo isdhexgal cusub, oo aan dib ugu falanqeyn doonno fiidiyow kale.
Musharaxa lambarka 1
IPhone-ka cusub ee 11-ka ah ee loo yaqaan 'Max 1 Pro Max' wuxuu ku haminayaa inuu noqdo lambarka 5-aad ku dhowaad nooc walba, maxaa yeelay waa inuusan waligiis joojin. Kaamiro aan u baahnayn rashka ama khiyaanooyinka si loo gaaro natiijooyin la yaab leh, batari ku siin doona saacado badan oo aad isticmaasho, awoodda aan lala tartami karin ee had iyo jeer iyo naqshad qurux badan. Had iyo jeer waxaa jiri doona kuwa dhaha ma leh XNUMXG ama isku xiraha ma aha USB-C, laba faahfaahin oo laga yaabo inay soo afjaraan imaatinka mustaqbalka dhow, laakiin aan u adeegi doonin in lagu khaldo qalab toban ah. Waxa aan cudurdaar lahayn waa aaladda "Pro" oo qiimihiisu yahay € 1259 inay ka bilaabato 64GB awood ahaan.
Wanaagsan, kamarad macquul ah oo fiidiyoow fiican leh
Naqshad aan nusqaan lahayn
Madax-bannaanida maalinta oo dhan
Waxaa kujira xeedho xawli leh oo 18W ah
Kiristaalo ka xoog badan
64GB awood boot
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » IPhone 11 Pro Max dib u eegis: Apple waxay na siisaa wixii aan weydiisanay
Kaliya waa inaad aragtaa dib u eegista Youtubers sida Marquees Brownlee ama Everythingapplepro waxaadna ogaaneysaa sida ay ugu sharraxayaan horumarka shaashadda ama sida loo maleynayo inay ka fiican tahay FaceID "aan la dareemi karin". Ka dib markay tijaabooyin sameeyeen xaalado badan waxay ku qeexaan inay ka sii xun tahay. Xitaa waad arki kartaa tijaabooyinka hoos u dhaca halka ay iPhone-ka sanadkaan ka hor jabiyaan. Laakiin haye, labadiinaba adiga iyo boga kale ee caanka ah ee caanka ku ah Spain waxaad iga dhaadhicineysaan in tani ay tahay boodbood weyn sanadkii hore. Haddii Apple uusan u baahnayn inay wax cusub curiso. Marka taasi?
Ma aqaano dib u eegista Marques ee aad aragtay… laakiin ku qiimee shaashadda mid la yaab leh, runtiina waa shaashadda ugu fiican suuqa hadda: https://www.actualidadiphone.com/el-iphone-11-pro-max-tiene-la-mejor-pantalla-del-mercado/
Marka laga hadlayo tijaabada dhibicda, anigu garan maayo waxaad aragtay midkoodna, maxaa yeelay imtixaankan way istaagaan laakiin si aad u wanaagsan:
Laakiin haye, waad sii aaminaysaa cidda aad rabto, uguma talagalin inaan qanciyo qofna.
Markii aan arkay cinwaanka "Apple wuxuu na siinayaa wixii aan weydiisannay" Waxaan joojiyay aqrinta, maxaa yeelay waxaa iska cad in iphone-kan cusub uusan laheyn 5G, oo ah tan aan dalbanay.
Ku jawaab Lacacito
Haa, muuqaalkani waa mid waxtar weyn u leh wadamada sida Isbaanishka halkaasoo imkaaniyaadka hadda jira ay yihiin 0%.
Sida loo wareejiyo xogta ka mid iPhone in kale
Dhammaan macluumaadka ku wareeji iPhone-kaaga cusub oo leh 'AnyTrans'